Fialam-boly sy fanabeazana – Tsy afa-misaraka ny fianarana sy ny vaky boky - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fialam-boly sy fanabeazana – Tsy afa-misaraka ny fianarana sy ny vaky boky
SOMARY MANADINODINO NY VAKY BOKY NY ANKAMAROAN’NY ANKIZY SY TANORA MALAGASY ANKEHITRINY. TSY HO FIALAM-BOLY FOTSINY IHANY ANEFA, FA IO IHANY KOA NO FOTOTRA IRAY HAHAFAHANA MIVOATRA, INDRINDRA MANAMPY BETSAKA AMIN’NY FAHALALANA ANKAPOBENY SY MANAMPY NY FANAZAVANA IREO LESONA TOVOZINA ANY AN-TSEKOLY. TSY AFA-MISARAKA, ARAKA IZANY, NY VAKY BOKY SY NY FIANARANA
Tandra vadin-koditra amin’ny fianarana ny vaky boky. Manana ny lanjany mandritra ny fanomanana fanadinana ihany koa izy ary manampy ny mpianatra amin’ny fanazavana ny lesona azo tany am-pianarana. Ny famakiana lesona anefa dia vakiteny fa tsy vaky boky satria ny lesona dia mampiasa fitadidiana be fa tsy toy ny vaky boky, izay natao ho fanampiana ny zavatra efa hay sy fandalinana ary fialam-boly fotsiny ihany.
Mandritra ny vakiteny amin’ny famerenan-desona dia ilaina ny fananana karine kely entina mandray an-tsoratra izay mbola tsy azo tsara ka mila ampiana amin’ny alalan’ny fikarohana na vaky boky. Raha vaky boky fanaovana fanazarana (livre d’exercice) kosa indray dia tsy tokony hamaky fe hamaky fotsiny fa ilaina ny fanaovana ireo fampiharana ao anatin’ilay boky. Raha misy fanitsiana kosa indray ao anatiny, dia tsy tokony hijery avy hatrany ny fanitsiana ilay mpamaky boky fa tokony hanandrana aloha hanamorana ny fijerena ireo zavatra mbola tokony hatevenina. Manana ny lanjany manokana amin’ny fahalalana ny voambolana tena fanoratra sy ny tena heviny marina ihany koa ny vaky boky satria izy dia fitahirizana ny teny tsy ho simba.
Fomba fanaovana tatitra vaky boky
Manampy betsaka ny fitadidiana ny fanaovana tatitra vaky boky (fiche de lecture). Tsy ny boky rehetra akory no anaovana tatitra fa ireo boky mirakitra tantara foronina sy ny iray karazana aminy ihany. Ny tena mahazatra ary efa fanao dia ampanarahina ny onjan’ny tantara ilay tatitra, izany hoe manaraka ny fivoaran’ny tantara.
Maro ny zavatra tsara ho fantarina mialoha ny fanaovana tatitra vaky boky. Ilaina fantarina voalohany ny momba ny mpanoratra sy ny fotoana nanoratana ilay asa soratra. Manaraka izany ireo mpandray anjara fototra sy ny toetrany sy ny mombamomba azy. Avy eo jerena ny fotoana nitrangan’ny tantara sy ny fivoaran’ny tantara. Amin’ny maha tatitra azy dia atao amin’ny teny tsotra ny famintinana ary tsy atao lava be, izany hoe tsy tokony hihoatra ny roa pejy. Tokony hatao iray toerana ireo takela-taratasy misy ny tatitra mba hanamorana ny fijerena azy amin’ny fotoana ilana azy.
Mora ny boky tonta
Mora kokoa raha mihoatra ny any amin’ny trano fivarotam-boky ny eny amin’ny toerana fivarotana boky tonta. Tsy vitsy araka izany ireo olona mifamezivezy eny Ambohijatovo, mitady izay boky ilainy. Hita eny avokoa na ireo ray aman-dreny mampiana-janaka, na ny mpianatra, na olon-tsotra.
“Ny boky fanomanana fanadinana no tena ifanotofana ety amin’izao fotoana izao”, araka ny fanazavan’i Tantely, mpivarotra boky tonta eny Ambohijatovo. Raha ho an’ny ankizy hanala fanadinana na bakalorea na Bepc dia manodidina ny 10 000 Ar ka hatramin’ny 15 000 Ar eo ho eo ny vidin’ny boky fanazarana toy ny “Annales Brevet” sy ny “Annales Bacc”. Raha ho an’ny ankizy madinika any amin’ny ambaratonga ambany indray dia manodidina ny 5 000 Ar ka hatramin’ny 10 000 Ar eo ny vidin’ireo boky fampiasa any am-pianarana. “Mora kokoa ny boky eto aminay satria efa nampiasaina. Izany akory tsy midika hoe efa simba na tsy ampy takelaka ilay boky fa mbola voakojakoja tsara toy ny vaovao mihitsy”, hoy hatrany ny fanazavany.
TAFATAFA TAMIN’I Lalaina RABEARISOA (Tompon’andraikitra ao amin’ny Tranomboky monisipaly) *Inona no mampiavaka ny ankizy mamaky boky?
- Misy fahasamihafana ny mpianatra mamaky boky sy ny tsy mamaky boky. Na ny zavatra fantatra fotsiny ihany aza dia efa hitarafana izany fahasamihafana izany.
Inona no boky tena be mpitady aty amin’ny Tranomboky?
- Ny boky fianarana nosoratan’ireo mpampianatra avy eto Madagasikara no tena ifandrombahana eto aminay. Ny tsy fitovian’ny fandaharam-pianarana no tena antony tsy mandrisika ny ankizy hijery ireo boky nataona mpampianatra vahiny.Matetika dia maro ireo mpianatra no mamaky izay boky ilainy any amin’ny fandaharam-pianarana ataony. Misy betsaka ihany koa anefa ireo mitady boky natao ho fialam-boly.
*Misy sokajin-taona ve ny fidirana trano famakiam-boky?
-Tsy mifidy sokajin-taona satria misy hatramin’ny ankizy any amin’ny kilasy ambany ka hatrany amin’ireo efa mamita fianarana no tonga mamaky boky eto. koa ireo mpiasa na olon-tsotra te hiala voly na te hanita-pahalalana na ihany koa mitady tahirin-kevitra no tonga eto aminay. ho an’ny rehetra ny trano famakiam-boky na amin’ny andro fianarana na amin’ny andro fialan-tsasatra.
“Mamaky sary sy mijery soratra”
Willy Rahetilahy, talen’ny tranom-bokim-pirenena Anosy.
«Mandritra ny fialan-tsasatra dia tokony havela haka aina ny atidoha fa tsy tokony hofenoina zavatra be dia be. Raha te-hamaky boky anefa ny ankizy dia tokony boky tsy ilàna fampiasan-tsaina no vakiany fa boky feno sary ary mamaky sary sy mijery soratra», araka ny fanazavan’i Willy Rahetilahy, talen’ny Tranomboky nasionaly.
Miankina amin’ny fahaizany mamaky teny sy manoratra no tokony hisafidianany ny boky vakiana, ho an’ny ankizy manomana fanadinana. Ny mpampianatra mantsy rehefa mitsara fanadinana dia tiany ny mahita ankizy mahafehy tenim-pirenena iray. “Boky tsy lava be no tokony hojeren’ny ankizy manomana fanadinana satria efa akaiky ny fotoana ka tsy tokony handany andro hitadidy ny zavatra voasoratra tao anaty boky”, hoy hatrany ny fanazavany. Ny zavatra tokony hataony koa dia ny mijery fomba tsara hahafahana mitadidy ny fomba fanaovana ilay taranja (méthode) mba hanamora ny fitadidiana azy mandritra ny fanadinana.
Torohevitra ho an’ny ray aman-dreny
Ahalalana zavatra maro ny vaky boky satria dia ao avokoa no ahitana ireo teoria rehetra. “Ao anaty boky no ahafantarana izao tontolo izao fa tsy ny fitetezana izao tontolo izao, ao anaty boky ihany koa no ahitana ny tantara, ny tranga niseho nandritra ny vanim-potoana iray tsy niainana dia ny boky no ahafantarana azy”, hoy ny fanazavan’i Daniel Rajoelison, mpampianatra eny amin’ny Oniveversiten’Antananarivo.
Araka ny maha soratra ny boky dia mitoetra izy fa tsy mandalo tahaka ny tantara am-bava. “Ao an-trano no tokony ho trano famakiam-boky voalohany hitaizana ny ankizy. Sakafon-tsaina ny boky ary manampy ny ankizy ho tia karokaroka eo amin’ny fiainany”, hoy hatrany ny fanazavany.
Tsy tokony hoterena be fotsiny ihany koa anefa ny ankizy hamaky boky fa tokony ampafantarina azy ny voka-tsoa azo avy aminy. Ilaina ihany koa ny fanohanana azy ara-kevitra, indrindra fa ny ara-tsakafo. Tsara sady tena tokony hoanin’ny ankizy hanala fanadinana ny fihinanana sakafo misy kasiôma sy prôteina, toy ny trondro sy ny sôkôla. Manampy betsaka amin’ny hery fiarovana ihany koa ireo sakafo ireo sady manampy ny atidoha. Etsy an-daniny izany dia tokony haka aina ny ankizy mialoha ny fanomanana fanadinana fa manjary reraka ny atidoha ary tsy hisy zavatra tafiditra mihitsy.
Fanadihadina manokana, Mpanoratra Rijakely, 05.07.2012, 10:16	FIARAHAMONINA